Somaliland.Org » Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Sabti, 31 May
May 31st, 2008 Comments Off Wefti ka socda QM oo isku khilaafay socdaal ay ku imanayaan waddamo Somaliland ku jirto By: Matthew Russell Lee New-York (Ogaal/Inner City Press)– Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa booqashooyin ku tegi doona shan waddan oo Qaarada Afrika ka tirsan, kuwaasoo ay ku jiraan Soomaaliya iyo Suudaan toddobaadkan. Hase yeeshee, iyada oo aan la gaadhin bilawga booqashaddaas waxa soo baxaya khilaaf ka dhashay la xidhiidha kala-horaysiinta iyo mihiimadda meelaha booqashooyinka lagu marayo. Socdaalkan oo qaadanaya toban maalmood, ayaa sida la sheegay inuu qorshuhu ahaa waxa barnaamijka ugu balaadhani ku jihaysnaa Gobolka Juba ee koonfurta dalka Suuddaan, hase ahaatee, waxay haatan u muuqataa in hakashadii halkaa meesha laga saaray, ka dib markii uu Ambaassadoorka Koonfur Afrika u fadhiya Golaha Amaanka Amb. Kumalo uu rabitaankiisa u bedelay in si toos ah loo tago magaalada Muqdisho ama Baydhaba ee dalka Soomaaliya, balse taasna waxa codka diidmada ah ku horistaagay Hay’adda Nabadgelyada iyo Amaanka u qaabilsan Qaramada Midoobay. Wakiilka khaaska ah ee Xoghayaha Guud Qazi ayaa diyaarinayay qorshayaasha nabad-ilaalineed ee la guda galayo, isaga oo jooga magaalada New York, sidaa waxa faafiyay wargeyska Inner City Press, oo ka soobaxa dalka Koonfur Afrika. Qorshayaashana waxa lagaga soo horjeedaa hadii uu goluhu meesha ka saaro socdalka ay ku tagayaan Gobolka Juba, isla markaana ay booqdaan keliya waqooyiga Suuddaan, kuna hakadaan magaalooyinka Khartoum iyo Darfur, ay markaa noqonayso socdaalkoodu mid diraya farriin dayacaad ah iyo inaan xiise loo hayanin koonfurta Suudaan iyo heshiiskii loo dhamaa toona. Halka ay wufuuda golaha qarkood isku deyeyaan inay ku qanciyaan madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir inuu u socdaalo waqooyiga si uu magaalada Khartoum iyaga ugula kulmo, ayaa sida uu faafiyay wargeyska Inner City Press, waxa ay taas wax ka waydiiyeen Ambassador Kumalo, kaas oo jawaabtiisu aanay kala qeexayn in meesha laga saarayo tegitaanka Juba iyo inkale.
J: Waxa weeye Dastoorku mana taaban wax noo diidayaana kuma yaalo, waxaananu dadka reer Somaliland u cadaynaynaa in dawladan wakht